Ogaden News Agency (ONA) – Dhinacyadii Ku Loolamayay Siyaasada Liibiya oo Heshiiyay.
Dhinacyadii Ku Loolamayay Siyaasada Liibiya oo Heshiiyay.
Posted by ONA Admin	/ December 18, 2015
Wufuudda Liibiya ee ka qayb qaatay wada hadalka siyaasadeed ee Qaramada Midoobay ay soo qabanqaabisay ayaa sixiixay heshiis lagu soo afjarayo dagaalka sannadaha badan socday laguna dhisayo dawlad loo wada dhanyahay.
Saxiixan ayaa wuxuu ka dhacay magaalada Sukhayraat ee dalka Maqrib (Marocco), halkaasi oo tan iyo sanadkii la soo dhaafay ay ka dhacayeen inta badan wada-xaajoodyada dhex marayay wakiillada labada baarlamaan ee Liibiya ee iska soo horjeeday.
Heshiiska ay taageerayso Qaramada Midoobay ayaa la filayaa inuu sii socdo inkastoo ay jirto diidmo ka imanaysa hoggaamiyeyaasha hay’adaha sharci-dejinta Liibiya ee iska soo horjeeda.Waxay diideen in ay qabtaan cod ay si rasmi ah heshiiska ugu oggolaanayaan ama ku diidayaan.
Bulshada caalamka ayaa rumaysan in dhammaystirka heshiiskan uu noqonayo tallaabada koobaad ee hannaan dheer oo si degdeg ah ugu baahan inuu wax ka qabto qorshayaasha ah sidii salka loogu dhigi lahaa dowladda iyo dalkaba.
Kuwa diidan saxiixa heshiiska ayaa waxay ku kala qaybsanyihiin wasiirrada dowladda wadaagga ah ee la qorshaynayo, iyo sidoo kale faah faahinta heshiiska ee ku aadan hoggaanka militariga. Liibiya ayaa inta badan waxaa maamula maleeshiyaad uu loolan ka dhaxeeyo kuwaasi oo aanan ka qayb qaadan wadaxaajoodyada. Lamana oga halka saldhigga u noqon doonta dowladda cusub ee la dhisayo.